ktmkhabar.com - हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?
हजार रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको कति ?
बिहिबार, बैशाख १५ २०७९
अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार सुनको मूल्य एक हजार रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुन तोलामा एक हजार रुपैयाँले घट्दै ९८ हजार रुपैयाँमा झरेको हो ।
यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि आज तोलामा एक हजार रुपैयाँले नै घट्दै ९७ हजार ५०० रुपैयाँ कायम भएको महासंघले जनाएको छ । यता चाँदीको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा २० रुपैयाँले मात्र घट्दै आज एकहजार ३२० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रतितोला एक हजार ३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
पछिल्लो समय सुन चाँदीमा भारी वृद्धि हुँदै आएको थियो । बिश्व बजारमै सुनको मूल्य बढेको बताइँदै आइएको थियो । रुस युक्रेन युद्धको असले पनि सुनको मूल्यमा परेको बताइएको थियो । विवाहको लगन धेरै भएका कारण सुन चाँदीका पसलमा अहिले सर्बसाधारण हरुको भिडभाड हुने गरेको छ ।
सुनको मूल्यसुनचाँदी व्यवसायी महासंघ
प्रतितोला ८०० रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
२१ वर्षीय युवाले ल्याए नयाँ ई–कमर्स वेबसाइट, गर्नुहोस् आर्थिक झन्झटलाई सदैका लागि बाई बाई !
प्रतितोला रु ३०० ले बढ्यो सुनको मूल्य
सुनको मूल्य तोलामा ४०० रुपैयाँ घट्यो